Daawo Video: Jamaal Cali Xuseen oo La yaabay Xukun ka dhacay Hargeisa | KALSHAALE
Daawo Video: Jamaal Cali Xuseen oo La yaabay Xukun ka dhacay Hargeisa
Feb 10, 2019 - 4 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen ayaa sheegey in maxkamadaha Somaliland u baahanyihiin dib u habayn, Kadib markii uu goobjoog u noqday xukun hal sano oo xayiraad ah lagu riday wargayska Foore oo magaalada Hargeysa ka soo baxa.
“Somaliland waxay u baahantahay dib u habeyn dhanka Garsoorka Iyo Cadaalada ah, Hadii Xaqadara la garab istaago maaha wax wanaagsan, Xukunka ku dhacay Wargeyska hadii alle laga baqayo maaha, mid wanaagsan. “ Ayuu yidhi Jamaal Cali Xuseen.
Axzaabta seddexda xusbi qaran iyo shaqsiyaqdka siyaasiga ahiba ma garanayaan shaqadooda? Waxna dawladdaa leh waxna axzaabtaa leh ka hadalkeeda ? Labadiibaa osaga dhex milmay axzaabtii waxaad ka dareemaysaa nacayb iyo ku talax teg ? Tusaale oday dhaqameedka ku hadlayey wax dhacay oo haddii siday tahay loo raaco garta lagaga helayo soo faqideedu sow maaha dhidar xabaalo qodaa qudhun buu u dhaadhacaa? Suldaan inoo ilaali dhaqanka wanaagsan oo ha noqon sida beesha dhexe salaadiintooda aan waxba ka xishoon
Dabad iyo gudo waa nabad qabnaa
Oo balo iyo baas midna ma qabno
somaliland na waa muqadas
shaqo ayaan leeyee nabadeey
Waar jamal adeer wakhtiga ha isaga dhumin Hargaysa haddaadan sida jeegaanta u mirqaansanayn. Qabo halkaad ka timid oo isaga tag meesha. Yaa ku yidhi dad miyir qaba ayaa maxkamad ku qaada woqooyiga Soomaaliya.